गायिका अञ्जु पन्तको बिहेको चर्चा चलीरहेको बेला सार्वजनिक गरे सँगै बसेका तस्बिर, अब बिहे कहिले ? – Namaste Host
February 4, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on गायिका अञ्जु पन्तको बिहेको चर्चा चलीरहेको बेला सार्वजनिक गरे सँगै बसेका तस्बिर, अब बिहे कहिले ?
काठमाडौं, गायिका अञ्जु पन्तसँग विवाह गर्ने तयारीमा रहेका गीतकार थिर कोइरालाले सँगै बसेका तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा सत्य हो भन्दै आफूहरू चाँडै विवाह गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई जना सँगै बसेका तस्बिर सार्वजनिक गर्दै कोइरालाले लेखेका छन्, ‘तपाईंले मिडियामा सुनेको खबर सत्य हो, हामी केही समयदेखि एकअर्काको प्रेममा छौं र निकट भविष्यमा नै एक हुने तयारीमा छौं। कहिले र कहाँ भन्ने कुराको सबै जानकारी दिने नै छौं।’
बलिउडमा अब बिहे गर्ने पालो श्रद्धा कपूरको, नेपालीसँग गर्दैछिन् बिहे काठमाडौं। बलिउडमा अब बिहे गर्ने पालो श्रद्धा कपूरको आएको छ । अभिनेता वरुण धवनले यसको संकेत गरेका हुन् । वरुणले हालै नताशा दलालसँग बिहे गरे । त्यसपछि वरुण र नताशालाई बधाइ दिँदै रोहन श्रेष्ठले सामाजिक संजालमा एक पोस्ट गरेका थिए । हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार पोस्टको जवाफ दिँदै वरुणले भनेका थिए ‘आशा छ अब तिमी तयार छौ ।’
रोहन श्रेष्ठ नेपाली हुन् र बलिउडका चर्चित फोटोग्राफर हुन् । श्रद्धाका पिता शक्ति कपूरले पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै श्रद्धाले आफ्नो जीवनसाथी जसलाई रोजे पनि आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका छन् । तर, उनले रोहन र श्रद्धाको सम्बन्धबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । इटाइम्ससँगको अन्तरवार्तामा शक्तिले भने ‘रोहन श्रेष्ठ मात्रै किन उनले जोसँग बिहे गर्न चाहन्छिन् म सहमत हुनेछु ।’ कपूरहरु र श्रेष्ठहरु पारिवारिक मित्र हुन् ।